शिव सत्याल काठमाडौं, २७ मंसिर
टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामेछानेले ‘द लिडर’ नामक नयाँ रियालिटी शो सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे । अहिले उनको ‘द लिडर’को पक्ष विपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बहस भइरहेको छ ।
उनको रियालिटी शोको विषयमा चर्चा गर्नुअघि यसका जज (निर्णायक) का विषयमा कुरा गरौं ।
निर्णयकहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र पूर्वपत्रकार रवीन्द्र मिश्र छन् । अर्थात् सबै ‘पूर्व’ र ‘टेस्टेड’ व्यक्तिहरू छन् । बाँकी दुई जना पछि छनोट गरिने भनिएको छ ।
कतिपयले यी निर्णायकमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । डा. भट्टराई, कार्की र मिश्र नेता छान्ने निर्णायक हुन योग्य हुन् कि होइनन् भन्ने बहस पनि चलेको छ ।
डा. भट्टराई आफैं राजनेता बन्न नसकेका व्यक्ति पक्कै पनि हुन् । उनी नै संलग्न रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादीले १७ हजार नेपालीको ज्यान जानेगरी सञ्चालन गरेको ‘जनयुद्ध’कै कारण नेपालमा संघीय गणतन्त्र आएको सत्य हो । डा. भट्टराईहरूले नचाहे पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था थपिएको मात्रै हो । त्यसैले नेता कसरी बनिन्छ, नेतृत्व कसरी गर्नुपर्छ भन्नेजस्ता विषयमा डा. भट्टराई जानकार छन् । रियालिटी भनिने एडिटेड टेलिभिजन शोले नेता जन्माउन सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि डा. भट्टराई मनोरन्जन वा टाइम पासका लागि यो अभियानमा लागेका होलान् ।
तर, डा. भट्टराई नेपालको संविधान, प्रणाली र संसदले पत्याएर प्रधानमन्त्री बनाइसकेका व्यक्ति हुन् । त्यसैले कुनै व्यक्तिले कुनै टेलिभिजनमा सञ्चालन गर्ने एउटा रियालिटी शोको निर्णायक बन्न डा. भट्टराई अयोग्य नै भने हुँदै होइनन् ।
कार्की पनि नेपालको संविधान र प्रणालीले स्वीकार गरेर प्रधानन्यायाधीश भइसकेका व्यक्ति हुन् । र, कार्कीको जीवनमा अर्काे अनौठो संयोग पनि थपियो । उनी नेपालको सर्वाेच्च अदालतको ‘जज’ मात्र होइनन्, न्यायपालिकाको ‘चिफ जस्टिस’ पनि बनिन् । ‘चिफ जस्टिस’ बनिसकेका व्यक्ति टेलिभिजन रियालिटी शोको ‘जज’ बन्न अयोग्य हुनै सक्दैन ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिलाई हाम्रो संविधानले राज्यकातर्फबाट राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षजस्तो गरिमामय जिम्मेवारी मात्र दिन पाउने भनेको छ । सम्माननीय श्रीमान् कार्कीलाई संविधानले अरु जिम्मेवारी लिन रोके पनि ‘द लिडर’मा ‘जज’ बन्न रोकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशमा स्वीकार्य भएका व्यक्ति नेता छान्ने एउटा टेलिभिजन रियालिटी शोको निर्णायक बन्न लाग्दा आपत्ति जनाउनु वा प्रश्न गर्नु आफैंमा कमजोर मानसिकता हो । भलै, उनीहरूले आफ्नो पूर्व जिम्मेवारीको गरिमा र ओज कायम गरे कि गरेनन् भन्ने अर्काे प्रश्न भने हो ।
मिश्रका बारेमा धेरै कुरा गर्नै पर्दैन । आज हामी (सक्रिय पत्रकार) जे जस्तो काम गरिरहेका छौं, विगतमा उनले गरेको पनि त्यही काम नै हो । उनी पनि नेता बन्न नसकेका व्यक्ति भने हुन् । उनको पार्टीले गत उपचिर्वाचनमा जमानत जोगाउनै सकेन । तर, पनि मिश्रलाई नेता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान भने छ ।
अब रियालिटी शोबाट नेता छान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा चर्चा गरौं ।
रविको कार्यक्रम ‘द लिडर’ले छान्ने नेता भनेको ‘द लिडर’ कै नेता हो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद वा अन्य कुनै राजनीतिक दलको अध्यक्ष वा वरिष्ठ नेता छानिदिएर सो व्यक्तिलाई त्यस्तो पदमा आसीन गराउने होइन । डा. भट्टराई र मिश्र पनि निर्णयक रहेकाले बढीमा उनीहरूकै पार्टीको सदस्यता दिन सक्ने हो । बाँकी धेरै टाउको दुखाउन आवश्यक छैन ।
नेता जन्माउनै सक्दैन यो कार्यक्रमले ?
यो कार्यक्रमले नेता जन्माउन सक्छ । यो कार्यक्रमबाट छानिने नेता भनेको सबैभन्दा प्रमुख नेता त ‘द लिडर’कै हो । त्यसबाहेक सामाजिक समस्याका बारेमा आमजनताका विषयलाई राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने सामाजिक अभियन्ता जन्माउन सक्छ ।
अहिले नेपाली बजारमा देखिएका सामाजिक अभियन्ताहरू विशेष गरेर दुई प्रकारका छन् । पहिलो प्रकारका सामाजिक अभियन्ताहरू विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको पक्षपोषण गर्छन् । उनीहरूको काम भनेको आफू संलग्न आईएनजीओको जननी देशमा के कस्तो खालको कानुनी र सामाजिक व्यवस्था छ, त्यसको अध्ययन गर्ने र नेपालमा सोसम्बन्धी के कस्तो कानुनी र सामाजिक व्यवस्था छ, त्यसको ‘ग्याप’ पहिचान गरेर सोही आईएनजीको पक्षपोषणमा बोल्ने हो ।
दोस्रो प्रकारका सामाजिक अभियन्ताहरूको काम भनेको आफूलाई मन पर्ने राजनीतिक दल वा विचारधाराको पक्षपोषण गर्ने हो । यस्तो काम गर्नेहरू सक्रिय रूपमा राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएको देखिँदैन । तर, ती दलका कार्यक्रम, नीति र योजनाहरूको पक्षपोषण गर्छन् ।
‘द लिडर’बाट बन्ने नेताहरूले कस्तो खाले सामाजिक अभियन्ता बन्ने भन्नेमा आफैंले निर्णय गर्नुपर्छ । टेलिभिजन रियालिटी शोबाट छानिने ‘नेता’ले आफू राजनीतिक नेता बन्नका लागि ‘द लिडर’ नै काफी हो भन्ने भ्रम पाल्न हुँदैन ।
यसको नजीर निर्णायक मिश्रकै दलकी रञ्जु दर्शना हुन् । कठमाडौंको मेयरमा चुनाव लडेर चर्चामा आएकी दर्शनाको अहिले अवस्था के कस्तो छ भन्नेबारेमा खोजीनिती गरे पनि यसको जवाफ पाइन्छ । नेता बन्नु र चर्चित हुनु भनेको फरक विषय हो ।
किन ठीक छ ‘द लिडर’ ?
देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयो । यो प्रणाली र पद्धतिप्रति तीव्र असन्तुष्टि राख्ने एउटा बलियो तप्का सक्रिय छ । यो तप्का अहिलेको परिवर्तन उल्ट्याउन चाहन्छ । त्यही तप्काको जोडबलमा ज्ञानेन्द्र शाही, सुरेन्द्र भण्डारीजस्ता प्रवृत्तिहरू जन्मिरहेका छन् । स्वयम् डा. भट्टराई पनि यस्तै तप्काको जोडबलमा नयाँ शक्ति जन्माउन लागे । रवीन्द्र मिश्र र उज्ज्वल थापाहरूले यसैका लागि ‘वैकल्पिक शक्ति’ बनाए ।
रविको ‘द लिडर’ले नयाँ नेता जन्माउने भएपछि यो तप्का त्यतैतिर ब्यस्त हुन्छ । टेलिभिजन रियालिटी भनिने शोले जन्माउने ‘नेता’ले वडा सदस्य पनि जिताउन सक्दैन भन्ने सत्य स्वीकार गर्नुको साटो यस्तो तप्का अन्य अराजक गतिविधिमा लाग्दैन । त्यसैले ‘ल एण्ड अर्डर’ कायम गर्न अलि सजिलो हुन्छ ।
अहिलेका राजनीतिक दल, विशेष गरेर नेकपा र नेपाली कांग्रेस स्थापनाको मूल उद्देश्य नागरिकलाई राजनीतिक नागरिक अधिकार स्थापित गर्नका लागि थियो । यी दलको संरचना, नेता र नेतृत्व राजनीतिक नागरिक अधिकार स्थापित गराउने गरी बनेका छन्, बनाइन्छन् ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गठन भएको संविधानसभाले बनाएको संविधानले राजनीतिक नागरिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई एक प्रकारले टुंगोमा पुर्‍याएकाे छ । राजनीतिक नागरिक अधिकार प्राप्तिमा कुनै समस्या छन् भने यही संविधान संशाेधन गरेर पूरा गर्न सकिन्छ ।
अब नेपाली जनतालाई चाहिएको भनेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार हो । यो अधिकार प्राप्तिका लागि अहिलेको नेकपा र नेपाली कांग्रेसको संरचना बाधक छ । नेतृत्व अक्षम र नेता अनुभवहीन छन् । राजनीतिक दलको संरचना जनतालाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्ने दिशामा अघि बढ्न चाहँदैन, जान्दैन र सक्दैन ।
रविको ‘द लिडर’ले अहिलेका राजनीतिक दल र प्रणालीलाई राम्रै चुनौती दिन सक्यो भने नेकपा र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व जनतालाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्ने दिशामा अग्रसर हुन बाध्य हुनेछ । जुन, अहिले नेपालीको आमचाहनाको विषय हो ।
त्यसैले रविको ‘द लिडर’ ठीक छ । यो कार्यक्रमले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब अनुभूत गराउन सक्ने गरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।
र, ‘द लिडर’ बन्न जाने व्यक्तिहरूले म प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर कार्यक्रममा नजानु होला । ‘द लिडर’ भएकै आधारमा तपाईं वडा सदस्य बन्नका लागि पनि योग्य हुनु हुन्न । ‘द लिडर’ भएको व्यक्तिले पाउने भनेको कार्यक्रमको अन्त्यमा आयोजकले दिने पुरस्कार मात्रै हो । बाँकी जीवन तपाईंले नियतिको निर्मम यात्रा गर्दै आफ्नै तरिकाले जिउनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २७, २०७६, ०६:३१:००
भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न किन सकिएन सरकार ?